Pixelworks TrueCut ပလက်ဖောင်းသည်ရုပ်ရှင်ကို“ The Bravest” သို့သယ်ဆောင်လာသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Pixelworks TrueCut ပလက်ဖောင်းက "Bravest" ကိုရုပ်ရှင်ရုံကို Motion ဆောင်ကြဉ်း
Pixelworks TrueCut ပလက်ဖောင်းက "Bravest" ကိုရုပ်ရှင်ရုံကို Motion ဆောင်ကြဉ်း
Pixelworks, Inc (NASDAQ: PXLW), အဆင့်မြင့်အမြင်အာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့သောကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဆုရTrueCut® ပလက်ဖောင်း "အဆိုပါ Bravest" လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု-ထုပ်ပိုးဒရာမာတင်ဆက်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘေဂျင်းတွင်ပြသဖို့သောရုပ်ရှင်ရုံခြောက်ရက်ပတ်လုံးအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန် $ 85 သန်း၏ box Office ရဲအရောင်းထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးယခုတရုတ်ကိုဖြတ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံး HDR နှင့် SDR ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာဖြန့်ချိသည်။ ဤသည်ပွဲဦးထွက်သည့်TrueCut®ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခံရဖို့စတုတ္ထရုပ်ရှင်, ဤဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းသုံးပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့အလာဖို့ရုပ်ရှင်အခွင့်အလမ်းများသို့ကြည့်သည်။
"တရုတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂေဟစနစ်မိတ်ဖက်များလွှတ်ပေးရေးတို့အတွက်တက်ပြင်ဆင်ထားပြီ အဆိုပါ Bravest လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကျော်, ကြှနျုပျတို့ယင်း၏အောင်မြင်မှုကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် "ဟုရစ်ချတ် Miller ကနည်းပညာ, Pixelworks ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ်။ "ဒီ TrueCut မြင့်မားတဲ့ frame ကို-rate ကို format ကိုတသမတ်တည်း HDR နှင့် SDR နှစ်ဦးစလုံးဖန်သားပြင်ကိုဖြတ်ပြီး, ရုပ်ရှင်ရွေ့လျားမှုတစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံသစ်ကယ်မနှုတ်ဖို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး enabled ။ "
သြဂုတ်လ 1 အပေါ်ပြသဖို့st"ဟု The Bravest" ကို အသုံးပြု. ပထမဦးဆုံးအရေးယူ-ထုပ်ပိုးဒရာမာဖြစ်ပါသည် အထူးသက်ရောက်မှုများ အဆိုပါ TrueCut ပလက်ဖောင်းအသုံးချဖို့အဓိကမီးထဲမှာနိုင်ငံသားတွေကူညီပေးနေတရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြောင်းကိုဒေသခံမီးတိုက်လေယာဉ်။ နေဆဲရုပ်ရှင်ကြည့်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်အဆိုပါရုပ်ရှင်, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရွေ့လျားမှုရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်မြင့်မားဆနျ့ကငျြဘပါရှိပါတယ်။
မတ်လ 2019 အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, Pixelworks '' TrueCut ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအစွမ်းထက်အသစ်သောရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တသမတ်တည်းပေးပို့သေချာစဉ်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အသုံးပြု, TrueCut ရဲ့ tools တွေ, ဒီနေ့ရဲ့မယုံနိုင်စရာရုပ်ရှင်ရုံ, Home-ဖျော်ဖြေရေးနှင့်မိုဘိုင်း display တွေအပြည့်အဝအားသာချက်ယူ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးဖန်တီးမှုရည်ရွယ်ချက်မှစစ်မှန်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနဲ့ content provider များကို enable ။ TrueCut Motion တန်း, ဒီဗီဒီယိုကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဆုရ tool ကို suite ကို, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရုပ်ရှင်ဒဏ်ငွေ-ညှိ Motion Blur, Judder နှင့် Frame က-နှုန်းသည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နိုင်စွမ်းပေးရန်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံးဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံကနေစမတ်ဖုန်းနှင့် ကျော်လွန်. - Pixelworks စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် display ကိုအားလုံးဖန်သားပြင်ကိုဖြတ်ပြီးသာလွန်အမြင်အာရုံအရည်အသွေး, နှင့်အတူမြင့်မားသည့်စစ်မှန်သောကြည့်အတွေ့အကြုံများကို enable ပြုလုပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်နည်းပညာပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြသမှုနှင့်ဗီဒီယို streaming များန်ဆောင်မှုများပေးရန် image processing တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပို့ဆောင်တစ် 20 နှစ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ Pixelworks San Jose, CA. အတွက်ရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာကုမ္ပဏီရဲ့ web site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.pixelworks.com.
မှတ်ချက်: Pixelworks, အ Pixelworks လိုဂိုနှင့် TrueCut Pixelworks, Inc ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2019-08-08
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ DaVinci 16.1 ဖြေရှင်း
နောက်တစ်ခု: Method ကိုရဲ့ Lewis Carson RSP ပညာရေးမှာ VFX အဆိုတော်အဖြစ်အောင်မြင်ဖို့ကိုဘယ်လိုသင်ယူ